The U.S. Postal Service Has Begun Delivering Ballots Today, April 29, 2020 for the May Primary Election - Somali | Multnomah County
The U.S. Postal Service Has Begun Delivering Ballots Today, April 29, 2020 for the May Primary Election - Somali
Adeegga Boostada ee Mareykanku waxa uu bilaabay In uu waraaqaha codaynta bixiyo maanta, Arbaca, Abriil 29 kuwaasoo loogu tala galay Doorashada Horudhaca ah ee Maajo 19. Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah ee aan helin waraaqaha cod-bixinta marka la gaaro Khamiista, Maajo 7 waa in ay xafiiska doorashooyinka degmada ka wacaan 503-988-VOTE.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay cod-bixiyeyaasha ku dhiiri galinayaan in ay guriga joogaan, amaan ku joogaan kuna codeeyaan boostada
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay cod-bixiyeyaasha ku dhiiri galinayaan in ay guriga joogaan, amaan ku joogaan kuna codeeyaan boostada. Ayada oo uu ku mahadsanyahay sharciga boostada lacagta la sii bixiyey ee la meelmariyay 2019 — wax shaabad ah looma baahna. Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah waxa ay haystaan ilaa Maajo 14 si ay si nabad galyo ah boostada ugu soo celiyaan waraaqahooda codaynta ee loogu tala galay Doorashada Horudhaca ah ee Maajo 19. Wixii ka danbeeya taariikhdaas, isticmaal Meel kasta oo Rasmi ah oo La dhigo Waraaqaha codaynta oo ku taalla Oregon, si aad u soo celiso waraaqaha codaynta marka la gaaro 8:00 fiidnimo, Maajo 19, 2020. Si aad u hesho goobta rasmiga ah ee waraaqaha codaynta la dhigo ee kuugu dhow, bookho multco.us/dropsites.
Cod-bixiyeyaashu waa ay isdiiwaangalin karaan si ay ula socdaan waraaqdooda codaynta una helaan istiikar macmal ah oo la yiraahdo “Waan Codeeyay” ( “I Voted” sticker). Fariin, iimayl, ama wargelin cod ah ayaa cod-bixiyeyaasha u sheegaysa xilliga xafiiska doorashooyinka degmadu diraan waraaqaha codaynta. Wargelintu waxa ay muujinaysaa in waraaqda codaynta la aqbalay si loo xisaabiyo ama in shaqo dheeraad ah ay uga baahan tahay cod-bixiyaha. Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah waa ay isdiiwaangalin karaan ayaka oo bookhanaya multnomah.ballottrax.net. Gudaha fariinta “Waraaqaha Codbixinta la Aqbalay” (“Accepted Ballot”), cod-bixiyeyaashu waxay heli karaan istiikar “Waan Codeeyay” ah oo khaaska u ah Oregon kaasoo u diyaarsan in baraha bulshada lagu wadaago. Istiikarka macmalka ah ee “Waan Codeeyay” waxa uu ku diyaarsan yahay Ingiriis iyo sagaal luuqadood oo dheeraad ah.
Cod-bixiyeyaasha u baahan caawimaad Xarunta Codaynta Degdegga ah (Voting Centre Express) ee bartamaha Gresham iyo Xafiiska Doorashooyinka Degmada Multnomah ee ku yaalla Koonfurbari Portland waa kuwo u furan Doorashada Horudhaca ah. Labada goobood ba waxa ay raacayaan hagitaanada kala durkinta dadka ee ay dejiyeen gobolka iyo Xarumaha Xakamaynta iyo ka Hortagga Cudurrada (Centers for Disease Control and Prevention). Adeegyada cod-bixiyaha in badan oo kamid ah ayaa lagu dhammaystiri karaa khadka internetka. Wixii su`aalo ah, fadlan wac 503-988-VOTE (8683).
Waraaqaha lagu codeeyey waa in la helaa marka la gaaro 8:00 fiidnimo Talaadada, Maajo 19. Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Doorashada Horudhaca ah ee Maajo 19, fadlan bookho www.mcelections.org.